အင်းတကော်တွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပိုးသတ်ဆေးသောက် သတ်သေခြင်းအပေါ် မယုံကြည်၍ အလောင်းကို ပြန်စ?? - Yangon Media Group
အင်းတကော်တွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပိုးသတ်ဆေးသောက် သတ်သေခြင်းအပေါ် မယုံကြည်၍ အလောင်းကို ပြန်စ??
အင်းတ ကော်မြို့နယ်အတွင်း အမျိုးသမီးတစ်ဦးပိုးသတ်ဆေးသောက်၍ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ်သေခြင်းကို မယုံကြည်သဖြင့် အလောင်းအား ပြန်လည်စစ်ဆေးပေးရန် သေဆုံးသူ၏မိခင်က ပြောသည်။ ဧပြီ ၈ ရက်က အင်းတကော် မြို့နယ် လသာအေးကျေးရွာအုပ်စု မိုဒုံကျေးရွာနေ မနှင်းဟေမာ (၂၇) နှစ် သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်း၏မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်စန်းမှုံက ဧပြီ ၂၂ ရက်တွင် မိုဒုံကျေးရွာ၌ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ကာ အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”’အန်တီသမီး သူ့ဘာသာ အဆိပ်သောက်သေတယ်ဆိုတာ လုံးဝမယုံဘူး။ အဆိပ်သောက်သေတဲ့အထိလည်း အိမ်မှာစိတ်ညစ်စရာ မရှိဘူး။ အမှန်တရားရတဲ့အထိ အန်တီကတော့ ဆက်ရင်ဆိုင်သွားမယ်” ဟု ဒေါ်စန်းမှုံက ပြောသည်။ မနှင်းဟေမာသည် ဇန်နဝါရီ လမှစတင်ကာ တစ်ရွာတည်းနေ ကိုကရင် (ခ) စောနေပတူး၊ မခင်မာဝင်းတို့၏ ကုန်စိမ်းဆိုင်တွင် အရောင်းဝန်ထမ်းအဖြစ် လုပ်ကိုင် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဧပြီ ၈ ရက် နံနက်ပိုင်း က ယင်းဆိုင်၌ အလုပ်လုပ်နေစဉ် ပါးစပ်မှအမြှုပ်များထွက်ရှိကာ ဆေး ရုံသို့ရောက်ပြီး မိနစ် ၃ဝ ခန့်အ ကြာတွင် သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
”အမေရေ။ အမေ့သမီးအဆိပ်သောက်လို့ ဆေးရုံရောက်နေ တယ်ဆိုပြီး ကျွန်မသားက အရင်ဖုန်း ဆက်တယ်။ ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ ခေါင်းထဲဒိန်းခနဲ ဖြစ်သွားတယ်။ ဒီလိုလုပ်စရာအကြောင်း ဘာရှိသလဲ ပေါ့။ အဲဒီနေ့ သမီးဝတ်သွားတာ ပန်းရောင်ဝမ်းဆက်ကလေးနဲ့ ပန်း ရောင်ဖိနပ်ကလေးစီးသွားပြီး အလုပ် သွားတော့မယ်ဆိုပြီး အိမ်ကထွက် သွားတာ။ အဲဒါသမီးကို နောက် ဆုံးမြင်လိုက်ရတာပဲ” ဟု ဒေါ်စန်းမှုံက မျက်ရည်များဖြင့်ပြောသည်။ ကုန်စိမ်းဆိုင်ပိုင်ရှင် ကိုကရင် (ခ) စောနေပတူးက ကုန်စိမ်းဆိုင် အတွင်း ၎င်းင့် ၎င်း၏အဒေါ် တို့ရှိနေစဉ် မနှင်းဟေမာသည် ဆိုင် နောက်ပေါက်မှ အထဲသို့ဝင်သွား ကြောင်း၊ မကြာမီ မနှင်းဟေမာ၏ပါးစပ်မှ အမြှုပ်များထွက်လာသည် ဟု အဒေါ်ကပြောသဖြင့် သိရ ကြောင်း၊ ယင်းနောက် အရေးပေါ် ကားခေါ်ပြီး ဆေးရုံသို့ပို့လိုက် ကြောင်း ပြောသည်။
မနှင်းဟေမာ အမြှုပ်ထွက် သည့်အချိန်တွင်လည်း ¤င်းတို့ကို အကြောင်းမကြားသလို အလောင်းအား ဆေးရုံ၌ခွဲစိတ်ခြင်းကိုလည်း မသိရကြောင်း ဒေါ်စန်းမှုံက ဆက် လက်ပြောသည်။ ဆေးရုံတွင် ပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းအဖြစ် လက်မှတ်ထိုးခြင်းအပေါ် ကုန်စိမ်းဆိုင်ပိုင်ရှင် ဒေါ်ခင်မာ ဝင်းက ”ဆေးရုံပို့ပေးတယ်ဆိုတာ လည်း ဆိုင်ကဝန်ထမ်းဖြစ်နေလို့။နောက်ပြီး လက်မှတ်ထိုးလိုက်တယ် ဆိုတာလည်း လောနေတော့ ဘာ မှန်းမသိဘူး။ သူတို့ကို ဖုန်းဆက် သေးတယ်။ မလာတာ” ဟု ¤င်း၏ နေအိမ်၌ မီဒီယာများကိုပြောသည်။
မနှင်းဟေမာသည် အိမ်ထောင်ကွဲနေသူဖြစ်ပြီး ကုန်စိမ်းဆိုင်ပိုင်ရှင် ဒေါ်ခင်မာဝင်း၏ ဖခင်ဖြစ်သူနှင့် ဧပြီ ၅ ရက်က ခိုးရာလိုက်ပြေးခဲ့ ကာ ရက်ပိုင်းမျှပေါင်းသင်းခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက် ဦးကျော်ဝင်းမှာ နေအိမ်မှ ထွက်ခွာသွားကြောင်း မိုဒုံရွာသား အချို့ကပြောသည်ကို ယင်းသို့ခိုး ရာလိုက်ပြေးကြသည်မှာ မှန်ကန် ကြောင်း အင်းတကော်မြို့မရဲစ ခန်းမှ ဒုရဲအုပ်ကျော်တင်ဦးက လည်း အတည်ပြုသည်။ ၎င်း၏ဖခင်မှာ ¤င်းနှင့်စကား များ၍ နေအိမ်မှထွက်ခွာသွားသည် မှာ တစ်ပတ်ခန့်ကြာပြီဖြစ်ပြီး မည် သည့်နေရာသို့ ရောက်ရှိနေသည်ကို မသိကြောင်း ဒေါ်ခင်မာဝင်းက ပြောသည်။
”အခြေအနေက မှုခင်းဆရာ ဝန်ရဲ့ ဆေးစစ်ချက်အပေါ်မူတည်တယ်။ သူ့စစ်ဆေးချက်ရမှ သား အိမ်မှာသုတ်ရည်ရှိ၊ မရှိ။ ပိုးသတ် ဆေးသောက်လိုက်တာက ဆန္ဒအလျောက်လား။ မဟုတ်ဘူး လားဆိုတာမျိုးက ဆေးစစ်ချက် ရမှ ဒါတွေကိုသိရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သေဆုံးသူဆီက သိမ်းဆည်းထား တဲ့ ဖုန်းနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်း တရားရုံးကို တင်ပို့ပေးမှာပါ” ဟု ဒုရဲအုပ် ကျော်တင်ဦးက အင်းတကော်မြို့ ရဲစခန်းတွင် ပြောသည်။ သေဆုံးသူ၏ အလောင်းကို ပြန်လည်စစ်ဆေးပေးရန် သက်ဆိုင် ရာသို့ တိုင်ကြားစာပေးပို့ထား ကြောင်း သိရသည်။